Nyochaa nke Uru Ahụ Ike Nke Ọhụrụ Nootropic Coluracetam Na Brain
Akụkọ ihe mere eme Coluracetam
Coluracetam akpọkwara BCI-540 ma ọ bụ 2- (2-oxopyrrolidin-1-yl) -N- (2, 3-dimethyl-5, 6, 7, 8-tetrahydrofuro2, 3-b quinolin-4-yl) acetoamide bụbu nke a maara dika MKC-231. Coluracetam bụ nootropic ọgbara ọhụrụ na ezinụlọ racetam agbanyeghị, ọ bụ nnukwu nootropic compound na ịkwalite ebe nchekwa na ọrụ ọgụgụ isi.
Coluracetam bụ nnoo, nri nri mgbakwunye enwetara site na piracetam. Onye mbu bu Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation meputara Coluracetam na 2005. Ha weputara ya dika ogwugwo oria nke oria Alzheimer. Agbanyeghi na mbido mbu gosiputara ufodu ikike, ha adabaghi ​​na njedebe.
Mgbe e mesịrị, e zigara ikike na BrainCells Inc. nke mepụtara ya maka ọgwụgwọ nke nnukwu ndakpọ mmụọ ịda mbà n'obi (UN) na ọgba aghara zuru oke (GAD) Ha ruru usoro ọmụmụ ihe ọmụmụ nke 2a nke na-akọ na enwere ike ịbelata ndị ọrịa site na isi nkụda mmụọ yana nchegbu.
Ọ bụ ihe nwute, Brain Cells Inc. etoliteghị ya ma ụlọ ọrụ mechiri emechi na 2014. Coluracetam wee nweta nkwado ikike kemgbe 2012.
N'agbanyeghị ihe ndị a niile, a na-ewere coluracetam dị ike nootropic onyinye. Ọ na - eme ngwa ngwa dịka ọ nwere ike ibute oke ọbara n'ọbara na nkeji iri atọ ị riri. Agbanyeghị, ọkwa na-agbada n'ime awa atọ nke ike nke pụtara mmadụ ga-enweta uru kachasị na elekere atọ iji ya.
Dịka racetams ndị ọzọ, coluracetam na-abawanye ọkwa acetylcholine, agbanyeghị usoro nke ọrụ ya pụtara. Coluracetam bụ ihe dị elu na-ebuli usoro njikọ dị elu choline uptake (HACU) si otú a na-abawanye ntughari choline na acetylcholine. A na - ejikọta neurotransmitter, acetylcholine na arụmọrụ na ebe nchekwa, ya mere ikike coluracetam dịka kọlụm nootropic.
Uru ndị ọzọ metụtara coluracetam gụnyere mmụba ọhụụ, ịkwalite nghọta na icheta ihe na-akwụghị ụgwọ, ịkwalite ọnọdụ, iwepụ ụjọ na nkụda mmụọ yana ihe maka iwulite ahụ.
A na - enweta Coluracetam site na mbadamba f, capsules ma ọ bụ mmiri mmiri. Enwere ike iji ya were ọnụ ma ọ bụ sublingally. Coluracetam bụ nootropic nwere abụba-ya na ya, yabụ, maka ntinye ngwa ngwa ọ ga-eji ya na mmanụ / abụba dị mma dịka mmanụ olive na-amaghị nwoke.
Nootropic a na-arụ ọrụ n'ime obere oge ka ọ na-abanye n'ọkwa dị elu na plasma n'ime nkeji iri atọ gachara nchịkwa.
Gịnị bụ Coluracetam?
Coluracetam bụ mkpokọta nootropic roba na abụba na-abụba na ezinụlọ racetam. Coluracetam makwaara dị ka BCI-540 akpọburu aha MKC-231.
Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ọhụrụ pụtara ọhụrụ, uru coluracetam nootropic na-ekwe nkwa. Ekwenyere na ọ na-enye abamuru dị ukwuu na ịkwalite ebe nchekwa, mmụta, belata nchekasị, nnukwu ịda mbà n'obi yana imezi ọhụụ.
Kedu ka coluracetam si arụ ọrụ na ụbụrụ?
Dị nnọọ ka racetams ndị ọzọ, coluracetam na-erite uru ụbụrụ site na imetụta choline ma mesịa acetylcholine na ụzọ dị iche iche. Nnyocha e mere ugbu a na-egosi na mmetụta coluracetam na ụbụrụ site na isi usoro atọ. A na-akọwapụta usoro ọrụ a nke coluracetam n'okpuru;
(1) Ingkwado ihe mmekorita di elu
Nootropics na klaasị racetam maara na ịmepụta mmepụta nke acetylcholine site na ịkpali ndị nabatara ọrụ. Otú ọ dị, ndị usoro coluracetam usoro pụrụ iche n'ihi na ọ na - eme ka mmepụta acetylcholine dịkwuo mma site na ịkwalite elu chofin uptake (HACU).
Usoro HACU bu udiri udiri jikota na-ebuga ya na ụbụrụ. Ọ bụ ntinye nke na-egbochi mmachi na usoro nke mmepụta acetylcholine. Acetylcholine bụ neurotransmitter metụtara ebe nchekwa, mmụta na ọrụ ọgụgụ isi.
Coluracetam Mmeju enwekwu ọnụego nke choline na-ebuba n'ime ụbụrụ na-eme ka enwekwu mmepụta nke acetylcholine. Ọ na - eme ka CHT1 dị elu, onye na - ebugharị ebugharị ebugharị, na - ebute nnweta nke choline maka iburu.
N'ihe banyere mmebi HACU, otu na - ahụta ihe akọwapụtara dịka ụyọkọ ụbụrụ wee nwee nchekwube yana mmụta. Coluracetam na-adọrọ mmasị na-eme ka ọkwa choline dị na plasma ọbara na-enyere usoro HACU aka ịrụ ọrụ nke ọma, ọbụlagodi mgbe ụfọdụ mebiri emebi neurons.
Mmụba nke acetylcholine na-emepụta ihe na neurons na-enyere aka ịkwalite ebe nchekwa dị mkpụmkpụ na ogologo oge, mmụta, yana ikike ime mkpebi ka mma.
(2) Imeziwanye ikike AMPA
Nnyocha ekpughere na coluracetam nwere ike ime ka alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid (AMPA) dị ike. Ndị na-anabata AMPA na-emetụta glutamate nke n'aka nke na-emetụta ikike dị ogologo oge (LTP) nke bụ ntọala maka mmụta na ebe nchekwa.
Ugbu a, Serotonin Selective Reuptake Inhibitors (SSRIs) bụ ọgwụ ndị a na-eji na ọgwụgwọ nke nsogbu ọgba aghara na nkụda mmụọ. Ndị SSRI ndị a, nwere mmetụta ọ na-emetụta ọkwa serotonin na ụbụrụ nke na-akpata ọtụtụ mmetụta ọjọọ.
Coluracetam na-abịa ọsọ aka dị ka ọgwụgwọ maka nsogbu ndakpọ mmụọ na nchekasị site na ịkwalite ọrụ glutamate n'ihi ya anaghị akpata mmeghachi omume metụtara nsogbu serotonin.
(3) Ichebe ndị na - anabata ndị NMDA ka ihe ojoo nke egbu egbu glutamate
Colzọ ọzọ nwere ike isi rụọ ọrụ bụ ikike iji chebe ndị nnata N-Methyl-D-aspartate (NMDA) site na nsị nke glutamate. Onye nnata NMDA bụ onye na-anabata glutamate yana protein ọwa ion na-eme na sel akwara. Onye na-anabata NMDA na-arụ ọrụ dị mkpa na njikwa nke synaptic plasticity na Memory.
Mmebi nke ndị na-anabata NMDA nwere njikọ na nsogbu ụbụrụ isi dị ka ọrịa strok, ọnya ọnya ụbụrụ, ọrịa Alzheimer n'etiti ọrịa ndị ọzọ nke ụbụrụ.
Uru nke Coluracetam
Nnyocha nke Coluracetam ghotara ya dị ka ike nootropic ndị ọrụ yana ahụmịhe coluracetam ziri ezi site n'aka ndị ọrụ ya '. Coluracetam bụ ihe mmetụ na-akpali akpali na-akpali akpali n'ihi usoro ọrụ ya dị ịrịba ama. Agbanyeghị, ebe ọ bụ ụlọ ọrụ ọhụụ ka amụtakwu ihe banyere mmadụ ka achọrọ iji gosipụta uru coluracetam tinyere.
N'okpuru ebe a bụ coluracetam uru onye ahụ ga - enweta ahụmịhe site na ojiji coluracetam na agbanwe agbanwe;
(1) Nwee ebe nchekwa na mmụta
Coluracetam na - abawanye nrụpụta nke neurotransmitter, acetylcholine metụtara mmụta na ebe nchekwa.
Ọtụtụ ọmụmụ na-egosi na coluracetam nwere ike ịkwalite ebe nchekwa na ọrụ ọgụgụ isi na oke. Agbanyeghị, ejiribeghị ụmụ mmadụ nyochaa ọmụmụ ndị ahụ mana nsonaazụ ya nwere ike ịdị otu.
Iji maa atụ, n'ọmụmụ oke maka oke ncheta adịghị ike, achọpụtara nchịkwa ọnụ nke coluracetam na 1-10mg / kg ka ọ ka mma na ebe nchekwa na-enweghị ihe ọjọọ ọ bụla.
Nyochaa Coluracetam na-egosi na ọ nwere ike ịkwalite obere oge na ncheta ogologo oge.
(2) Meziwanye nghota na ighota ihe
Coluracetam Mmeju nwere ike melite ncheta oge dị mkpirikpi, welie nlebara anya yana icheta n'efu. Njirimara ndị a na-enyere ndị na-amụ ihe na onye ọ bụla aka na asọmpi iji meziwanye arụmọrụ ha.
ọtụtụ ahụmịhe coluracetam site n'aka ndị ọrụ n'otu n'otu gosipụta ikike nke coluracetam iji bulie arụmọrụ site na ọgụgụ ọgụgụ ka mma yana yana icheta ihe ọmụmụ a na-akwụghị ụgwọ.
(3) Ntughari uche ogologo oge
A na-ekwu na Coluracetam na-emetụta usoro nchịkwa nke choline uptake site na-eme ka ọgụgụ isi rụọ ọrụ ogologo oge mgbe nchịkwa nke obere usoro coluracetam.
(4) Belata Mbelata Ọgwụgwọ
Nchoputa gosiputara na coluracetam mmeju bu ihe nwere ike inye ndi mmadu iguzogide ihe ojoo.
BrainCells Inc., mere ndị ọrịa iji gbochie nkụda mmụọ iji nwalee arụmọrụ nke coluracetam megide nnukwu ịda mba (MDD) na nsogbu ụjọ izugbe (GAD). Nsonaazụ nke mbu gosiri na coluracetam na 2mg / day bụ mmetụta megide MDD na GAD.
(5) Nwere ike ịkwalite Neurogenesis
Neurogenesis bụ usoro nke emepụtara sel ụbụrụ ọhụrụ. Usoro a dị mkpa maka arụ ọrụ ọgụgụ isi yana ahụike ụbụrụ niile.
Coluracetam nwere ike ịkwalite neurogenesis mana ụdị omume dị n'okpuru amachaghị. Nnyocha na-atụ aro na ọ nwere ike metụtara ikike nke coluracetam ịbawanye ọkwa nke acetylcholine na ọkachasị na hippocampus.
(6) Nwere ike melite nsogbu ụbụrụ
Coluracetam na - abawanye ọrụ acetylcholine nke nwere ike inyere ndị mmadụ aka na - ata ahụhụ Schizophrenia bụ nke enzyme na - abanye na njikọ acetylcholine na - arụkarị ọrụ.
O nwekwara ike meziwanye mmụta maka ndị ọrịa site na nkwarụ ndị ọzọ dị ka ọrịa Alzheimer.
(7) Nwere ike Mee Ọhụụ
Coluracetam bụ ihe na-adọrọ mmasị nootropic mejuputa na obughi nani na - eme ka cognition nwekwuo ike kamakwa ọ ga - eme ka ọhụụ gị nwee ọhụhụ site n ’ọhụhụ ụcha dị mma, ịmatakwu ọdịdị ka mma yana ịhụ ụzọ ka mma. O nwere ike ịgba ume uto nke akwara na ndị mmadụ metụtara ọrịa degenerative nke retina.
Ndị ọrụ nke coluracetam na-ahụ ihe dị iche coluracetam utịp tinyere agba cha cha cha acha acha, ọdịiche siri ike, na-elegide anya na ụdị na ọkụ na-enwuwanye ọkụ.
(8) Ahụhụ nrịba ọria
Ọrịa ịba n'ahụ na-arịa (IBS) bụ ọrịa na-emetụta nnukwu eriri afọ nke na-adabara iwu na-adịghị mma nke ndị na-ebugharị choline 1 (CHT1).
Ọmụmụ ihe ọmụmụ 2018 gosiri na coluracetam nwere ike ịhazi mkpụrụ ndụ nke CHT 1 wee wezuga mgbaàmà ahụ ma ọ bụrụ na ọgbụgbọ nke afọ mgbu.
(9) Ojiji ntụrụndụ Coluracetam
Coluracetam bụ onye na-eme ka ọnọdụ uche dị mma ma na-enye nwayọ nwayọ nwayọ. Egosipụta ya na-eme ka homonụ na-eto eto si otú a dị mma maka iwuli mmadụ elu. Agbanyeghị, egosighi ya dị ka ihe na-enye ike ma yabụ ekwesịrị iji ya na mkpali maka nsonaazụ kacha mma.
Coluracetam Vs aniracetam, fasoracetam, pramiracetam na Piracetam. Kedu ihe dị iche?
(1). Coluracetam na Aniracetam
Ma coluracetam na aniracetam bụ ndị ezinụlọ racetam. Ha bụ ihe abụọ nootropic supplements. A chọpụtara Aniracetam na mbido 1970s. A maara Aniracetam iji kwalite ncheta na ọnọdụ, belata nchegbu na mgbaàmà nke ịda mbà n'obi yana imeziwanye ebe mgbado.
Mgbe ha abụọ coluracetam na aniracetam na-emetụta ọkwa acetylcholine na ụbụrụ gị, ha dịgasị iche n’ụzọ ha si emetụta ya. Aniracetam na-eduga ozugbo na mwepụta nke acetylcholine karịa ebe usoro coluracetam bụ isi nke ihe bụ site na iwu nke usoro choline uptake dị elu na-eduga n'ịkwalite choline na ntughari ọzọ na acetylcholine.
Ọzọkwa, a hụwo coluracetam ka ọ na-eduga na nnukwu ọdịiche ma na-eme ka nkọwa dịkwuo elu ebe Aniracetam na-eduga n'inweta agba agba karịa.
N'agbanyeghị aniracetam na coluracetam nootropics bụ ndị na - emewanye ọnọdụ, Coluracetam bụ onye na - emewanye ọnọdụ karịa karịa aniracetam.
Ọzọkwa, ụfọdụ ndị ọrụ aniracetam na-akọ na nrụpụta dị mma. Coluracetam n'aka nke ọzọ na - eme ka ọhụhụ dị mma.
(2). Coluracetam na Fasoracetam
Fasoracetam bụ nootropic ọhụụ n'ime ezinụlọ racetam. A na-azụlite ya ka ọ bụrụ ọgwụgwọ nwere ike ịdị ma ọ bụ Ntị Ndọtị Hyperactivity Disorder (ADHD) na ụmụaka.
Dị nnọọ ka coluracetam, Fasoracetam bụ nootropic ike ụbụrụ nke nwere ike ime ka ebe nchekwa na ọrụ ọgụgụ isi zuru oke. Ha abụọ na - abawanye choline uptake nke eji eme ya na acetylcholine.
Otu usoro fasoracetam pụtara ìhè bụ ọrụ ya iji bulie ndị na-anabata GABAb. A na-ejikọ ndị nabatara GABA na mmụta, mmetụta nkịtị na-enyere aka belata nchegbu na ịda mbà n'obi yana ime ka ụra hie ụra.
Nodị nootropic abụọ a nwere ike nwee mmetụta yiri ibe ha. Agbanyeghị, njirimara dị iche bụ na, coluracetam na-emepụta acetylcholine n'ọtụtụ dị elu karịa fasoracetam. Ọzọkwa, ikike coluracetam n'ịkwalite ọnọdụ bụ nke a na-ahụ nke ọma ebe nke fasoracetam egosighi nke ọma.
Dịka racetams ndị ọzọ, Fasoracetam chọrọ ka ejiri ya rụọ ezigbo choline dị ka Alpha GPC. Agbanyeghị, o siri ike igbochi ya na nri ndị ọzọ. Ọ dị mma ịmara, coluracetam fasoracetam tojupụtara bụ naanị oghere tororo aro.
(3). Coluracetam na Pramiracetam
Pramiracetam bụ otu n'ime nootropics kachasị ike sitere na ezinụlọ racetam. O nwere ikike ncheta ike di egwu. N'adịghị ka racetams ndị ọzọ, nke a na-ejikarịghị eme ihe na ahụike, a pụkwara iji pramiracetam n'ahụ ndị mmadụ.
Dị ka coluracetam, pramiracetam na-abawanye neurotransmitter na ụbụrụ. Agbanyeghị, n'adịghị ka coluracetam ma ọ bụ racetams ndị ọzọ na-emetụta kpọmkwem ndị na-anabata ndị neuron, pramiracetam nwere ike imetụta ha niile ma metụta hippocampus.
Ọ bụ ezie na ha abụọ nwere ike imeziwanye ebe nchekwa, pramiracetam na-enyekwa uru nke ịbụ ihe mkpali. Agbanyeghị, coluracetam na-enyekwa abamuru ndị ọzọ site na pramiracetam nke ịbelata nchegbu na ịkwalite ọnọdụ.
Piracetam bụ nootropic izizi akpụkọtara na sie ike n'etiti ndị ọzọ nootropic na klas racetam. Piracetam bụ onye nrụpụta ọrụ dị mma maka ndị agadi na ndị nwere ọgụgụ isi. Agbanyeghị, ọ nwere ike ọ gaghị enyere mmadụ aka.
Ezie na piracetam na coluracetam na-akwalite ọkwa nke acetylcholine na ụbụrụ ụzọ ha si eme ihe dị iche. Piracetam na - eme acetylcholine ndị na - anabata ndị na - anabata Acetylcholine, ebe, coluracetam na - eme ka ntughari choline na acetylcholine dị elu site na ị na - emetụta usoro mmekọrịta dị elu choline uptake.
Usoro ọgwụgwọ Coluracetam, Stack, Supplement
(1) Usoro Ọgwụ Coluracetam
Nchịkwa nri na ọgwụ (FDA) na-ele coluracetam na racetam nootropics ndị ọzọ anya dị ka ọgwụ ndị ọhụrụ a na-akwadoghị na ya mere na enweghị usoro ọgwụgwọ coluracetam a kọwaa. Na nke a na-atụ aro usoro coluracetam ga - esite n’ọmụmụ ihe gbasara mmadụ mana ọ dị nwute na ọ bụ naanị nnyocha ụmụ mmadụ ka amachitụrụ.
Ọ dị mma, ihe niile anaghị efu ka ọtụtụ nyocha coluracetam sitere n'aka ndị ọrụ n'otu n'otu nyere aka ịnweta usoro coluracetam kwesịrị ekwesị. Usoro ọgwụgwọ dị mma dị n'etiti 5-20 mg kwa ụbọchị, na-agbanye onwe, na-atụnyere coluracetam ọnụ na nchịkwa sublingual mgbe ahụ enwere ike idozi ya dabere.
Na ịhọrọ mkpụrụ okwu coluracetam na nke usoro sublingual, usoro ọgwụ sublingual kwesịrị ịdị belata. Nlekọta Sublingual pụtara ịdobe coluracetam n'okpuru ire ma hapụ ya ka ọ gbasaa site na anụahụ. Nke a na-enye ohere coluracetam nootropic ka ọ na-aga kpọmkwem n'ọbara ọbara nke na-akwalite mmetụta coluracetam.
Imirikiti ndị ọrụ na-akọ banyere ọgwụ coluracetam nke 20-80 mg kwa ụbọchị na usoro onunu abụọ, otu n'isi ụtụtụ na nke ọzọ n'ehihie.
Agbanyeghị, ọgwụ coluracetam nke ihe dị ka 100 mg kwa ụbọchị were ugboro atọ ga-adị mkpa iji gwọọ nnukwu ịda mbà n'obi yana nsogbu ụjọ izugbe. Ejirila usoro onunu ogwu ihe ruru 240 mg kwa ụbọchị ugboro atọ emere ule n’enweghi mmetụta ọjọọ ọ bụla.
Dị ka ọ dị ọgwụ ọ bụla ma ọ bụ nke nri, na-amalite mgbe niile na nke kachasị dị irè ma bulie nwayọ dịka ahụ gị nwere ike ịchọ. Ekwesịrị iburu Coluracetam na isi choline dị mma iji kwado maka erighị ihe choline nwere ike ibute isi ọwụwa.
(2) Sturacetam Stack
Racetams na nri ndị ọzọ nootropic na-arụpụta nsonaazụ dị mma karị mgbe ejiri ya na mgbakwunye ndị ọzọ. Racetams choro ka ewere ya na ezigbo choline isi ya iji zere ihe ojoo na-ezighi ezi choline na ụbụrụ dịka isi ọwụwa. Coluracetam abụghị ihe dị iche.
Ọ bụrụ na ị na-atụle coluracetam alpha GPC nootropic tojupụtara, usoro onunu ogwu nke 300-600 mg kwa ụbọchị ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na 250-750 mg kwa ụbọchị nke CDP choline ga-enye nsonaazụ ka mma na 10-20 mg nke coluracetam kwa ụbọchị.
Coluracetam nwere ọtụtụ ihe ọma gụnyere, phenylpiracetam, tianeptine, noopept, modafinil, pramiracetam, piracetam na oxiracetam n'etiti ndị ọzọ nootropics.
Ebe ọ bụ na ịnwe ngwongwo nwere ike buru oke ibu ka coluracetam na-enye ohere maka nnwale, tụlee ngwakọta nke ga - eme ka ọgụgụ isi gị nwekwuo ike ma na - akpali ike ọgụgụ isi na nke anụ ahụ yana mmebi choline. Ndị dị ka tojupụtara gụnyere coluracetam oxiracetam stack, coluracetam fasoracetam tojupụtara n'etiti ndị ọzọ.
Ihe atụ nke tozuru oke coluracetam oxiracetam bụ
20 mg coluracetam - onye bụ isi cognitive enhancer
200 mg oxiracetam - na-ebikọ uru synergetic na coluracetam
200 mg caffeine- ime ihe dika mkpali
400 mg L-Theanine-iji kwalite izu ike
300 mg nke isi choline dika Alfa GPC emeju
(3) Mmeju Coluracetam
Enwere ike ịchọta mgbakwunye Coluracetam ụdị nke coluracetam ntụ ntụ, mmiri mmiri na-adịkarị mfe ewere sublingally yana kwa ka coluracetam capsules.
Enwere ụzọ dị iche iche nke otu esi ejikwa coluracetam ntụgharị coluracetam onu ​​vs sublingual nchịkwa. Nlekọta Sublingual dị irè karịa ọnụ. Mgbe etinyere mgbakwunye a n’arụ, ọ na-abanye kpọmkwem n’ọkpụkpụ ọbara, ya mere, ọ ga-adị mfe nnabata.
Coluracetam bụ ihe a ma ama maka ọrụ ya kachasị na ịkwalite ebe nchekwa na mmụta tinyere uru ndị ọzọ dịka ọhụụ na-eme ka ọhụụ dị mma, na-ebelata nchekasị na nsogbu ịda mbà n'obi yana ịgwọ ọrịa bowel syndrome.
Coluracetam na-arụ ọrụ kachasị site na ịba ụba ọkwa acetylcholine na ụbụrụ. Alternativezọ ọzọ maka inye coluracetam bụ iri nri choline-dị ka àkwá, imeju, anụ na anụ ọkụkọ, broccoli n'etiti ndị ọzọ.
Imirikiti ndị ọrụ coluracetam na-eji ezigbo choline arụ ọrụ dịka CDP-Choline ma ọ bụ Alpha-GPC iji kwalite nsonaazụ coluracetam ma belata nsonaazụ ndị ọ ga-ekwe omume.
Coluracetam bu mmanu nootropic nke nwere ike aru, ya mere, choro ka ewere mmanu di nma dika mmanu akpu eji ekpuchi mmanu, ma obu mmanu oliv na-amaghi nwoke ka inweta.
Mmetụta & Mmekọrịta
Coluracetam bụ ihe echekwara echekwa nke ọma nootropic ejirila mee ihe na-enweghị ihe ọghọm nsogbu. Agbanyeghị, ụfọdụ mmetụta dị nfe na-agafe agafe abọọla akụkọ. Nsonaazụ coluracetam na-abụkarị mgbe enwere oke.
Mmetụta Coluracetam ndị a ga-ekwe omume gụnyere;
Isi ọwụwa: Nke a bụ ihe juru ebe niile na racetams niile n'ihi eziokwu na mmụba choline na acetylcholine. Ezughị oke ụbụrụ n’ụbụrụ na-ebutekarị isi ọwụwa n’akụkụ ụbụrụ. Usersfọdụ ndị ọrụ coluracetam ekwuola na isi ọwụwa. A na-emezi nke a site na iji ezigbo choline maa mma ma belata usoro onodu ogwu.
Fogbụrụ ụbụrụ: nke a pụtara na-enweghị uche na mgbagha. Usersfọdụ ndị ọrụ nke coluracetam akọọla mmetụta nke disorientation yana enweghị elekwasị anya. Agbanyeghị, nke a na-apụ n'anya na iji coluracetam n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
A ojuju na ọnọdụ: Nke a bụ a atuaha nke Mmeju uru. Ọ bụ ezie na a maara ya dị ka nkwalite ọnọdụ uche ụfọdụ ndị ọrụ nke coluracetam na-enwe mmụọ dị ala na mbido ma nwekwaa oke dị elu. N'ụzọ dị mma, ịbelata ọgwụ ahụ nwere ike inye aka mee ka ọnọdụ ahụ ka mma yana iji ya na nkwalite ọnọdụ ka mma.
Nausea: mgbe a na-ewere coluracetam na nnyefere mmadụ karịa, ọ nwere ike inweta ọgbụgbọ.
Ihi ụra ehihie: Idoụbiga mmanya ókè nwere ike belata oke ịmụrụ anya gị n’ụbọchị.
Mmetụta Coluracetam ndị ọzọ a chọpụtara na-ewe iwe, nchekasị, echiche igbu onwe ya, na nsogbu ịnọ n'ụra abalị.
Ozi ọma ahụ bụ na a ga - egbochi ihe coluracetam niile;
Iji ya choline site,
Iji usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro ya.
Thenara mgbakwunye ahụ n'ụtụtụ na ehihie,
Iwere mmiri zuru oke.
Mmekorita nke Coluracetam
ụfọdụ mmekorita coluracetam A kọwo akụkọ na n'ihi ya, mmadụ kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-atụle mmeju a. King gwa dọkịta gị okwu, a dụrụ gị ọdụ ka eme ka ị mata banyere mmekọrịta mụ na ọgwụ ọ bụla na kwa na nhọrọ nke mmeju ahụ.
N'okpuru bụ ụfọdụ mmekọrịta mmekọrịta;
Coluracetam nwere ike igbochi ịdị irè nke ọgwụ anticholinergic, gụnyere ọgwụ Parkinson, Benadryl, na ụfọdụ antipsychotics.
Coluracetam bụ mgbakwunye cholinergic ma yabụ nwekwuo ike ibute nsonaazụ ọgwụ cholinergic, dị ka ọgwụ Alzheimer na glaucoma.
O nwekwara ike imetụta ọgwụ nnabata NMDA, dị ka ọgwụ ụkwara ụkwara na ọgwụ na-egbu mmụọ.
Nyocha nyocha na ahụmịhe onye ọrụ
Nnyocha nyocha ụlọ ọgwụ Coluracetam
Ọnwụnwa nke ụlọ ọgwụ mmadụ metụtara coluracetam bụ naanị otu ule Brain Cells Inc. mere. Nnyocha ahụ metụtara ihe karịrị 100 mmadụ na-ata ahụhụ site na nnukwu ịda mbà n'obi na oke nchegbu. Nsonaazụ nke mbu gosiri na coluracetam nwere ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na ha emeghị mgbakwunye ahụ.
N'agbanyeghị coluracetam ịbụ ezigbo ihe ngosipụta nootropic ọhụụ na ọmụmụ ihe mmadụ pere mpe, ụfọdụ ndị ọrụ n'otu n'otu na-akọ ụfọdụ uru yana nsonaazụ ndị ọzọ. Offọdụ n'ime ahụmịhe coluracetam a kọrọ bụ;
Nleba anya n’ile anya
Emeela ka obi ruo ya ala
Ikwalite ebe nchekwa
Napụtara m ụjọ
Nwee ihu ọma
Nleba anya nke oma
Nmalite mmụta ghoro ihe na icheta n'efu
Ma, ụfọdụ nyocha coluracetam kpughee ụfọdụ mmetụta:
Nsonaazụ ezighi ezi
Sleeprahụ ụra abalị
Ihi ụra ụbọchị
N'ihi enweghị nkwado sayensị na nke coluracetam mmetụta ndị dị n'elu, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị kpọtụrụ onye na-ahụ maka nlekọta ahụike tupu ị takingụ ọgwụ.
Kedu onye nwere ike iji coluracetam?
Coluracetam ntụ ntụ ma ọ bụ ihe ngwọta dị mma maka onye ọ bụla ga-achọ ị nweta ọtụtụ uru ya. Agbanyeghị, ndị mmadụ nwere ụfọdụ nsogbu ahụike dịka oria Parkinson, na-adụkwara ụmụ nwanyị dị ime ọdụ ka ha ghara iji mgbakwunye a.
Ndị mmadụ na-arịa ụkọ ncheta n'ihi ebumnuche dị ka afọ na ọrịa dịka Schizophrenia na ọrịa Alzheimer n'etiti ụkọ ncheta ndị ọzọ na-akpata ihe, nwere ike irite uru na mgbakwunye coluracetam.
Coluracetam ntụ ntụ dabara adaba maka ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na nchekasị na ịda mba dị ka ọ na-enwe ike ịkwalite ọnọdụ na ikike ịtụgharị uche. Coluracetam a na - abawanye acetylcholine na ụbụrụ, nke na - eme ka ebe nchekwa na elekwasị anya dịkwuo elu. Coluracetam maka ụjọ bụ ezigbo nhọrọ.
Coluracetam bụkwa ezigbo mgbakwunye maka ndị mmadụ na-achọ ịkwalite ọhụụ. Ihe mgbakwunye a na-enyere mmadụ aka ịhụ nke ọma site na ịkwalite ọhụụ, ọdịiche siri ike na ọkụ na-enwuwanye. Achọpụtala ya iji kwalite mmezi nke azụ na akwara ozi mebiri emebi.
Coluracetam ntụ ntụ ma ọ bụ ụdị mmiri mmiri ya bụ ezigbo mgbakwunye maka ụmụ akwụkwọ. Ọ bụ ike wulite nghọta na free oku ya mere nwere ike melite arụmọrụ.
A naghị ahapụ ihe ndị ọzọ na-ewu ewu n'ihi na mgbakwunye a nwere ike inye aka na ntụrụndụ na-eme ka ntụrụndụ na ahụ dịkwuo elu.
Ebe ka ịzụta Coluracetam?
Coluracetam maka ahia dị n'ịntanetị dị mfe. Ọ bụrụ na ị na-atụle ịzụ coluracetam maka ire ma ọ bụ maka ojiji nkeonwe, jiri nlezianya lelee maka ndị na-ere ahịa nwere aha ọma n'ịntanetị. Ebe ọ bụ na nke a bụ mmezi ọhụrụ ọhụụ ọ bụghị ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye coluracetam maka ire ere ya na ya nwere ike ịhọrọ ụzọ ndị ọzọ dị mfe.
Coluracetam bụ onye ọhụrụ n'ime ezinụlọ racetam ma nweta oke ewu ewu n'ihi ike ya iji rụọ ọrụ ọrụ ọgụgụ isi, yana iwelie ịhụ ụzọ.
Cozọ coluracetam nke ọrụ bụ site na ị na-emetụta usoro dị elu choline uptake (HACU). Nke a na - eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche na nke pụtara ìhè n'etiti racetam ndị ọzọ dị ka naanị phenylpiracetam nwere usoro yiri ya.
Eziokwu nke okwu ahụ bụ na ahụ anyị anaghị eme Coluracetam ndammana. Yabụ, ọ bụrụ na mmadụ ga-enwerịrị uru coluracetam mgbe ahụ ọ ga-esite na mmeju ahụ.
Agbanyeghị na ọ bụ naanị obere ọnwụnwa ndị mmadụ na-ede na-elele uru ọ bara, ọtụtụ mmadụ anwalela ya ma kọọ ụfọdụ uru.
Coluracetam maka ịda mba akọpụtawokwa obi erughị ala na nnwale ụlọọgwụ, nke a na - eme ya ezigbo nwa akwụkwọ maka ọmụmụ ihe ndị ọzọ iji kwado uru ndị a na - ekwu.
N'ihi mmachi ọmụmụ ụmụ mmadụ na mgbakwunye a, akọwapụtaghị mmetụta ndị ọ nwere ike ịkọpụta n'ụzọ doro anya, agbanyeghị, isi ọwụwa bụ ihe a na-ahụkarị na racetams.
A na-adụ ọdụ coluracetam na choline isi ya ka iwepu nsonaazụ na-apụta n'ihi ụkọ choline dịka isi ọwụwa. Stdị akpa a gụnyere coluracetam alfa GPC tojupụtara na coluracetam CDC choline tojupụtara.
Coluracetam bụ abụba nwere abụba, yabụ maka ka ọ dị mfe ịnabata ya n’ime mkpụrụ ndụ, ekwesịrị ya were abụba / mmanụ dị mma dịka mmanụ aki oyibo na-enweghị mmanụ, ma ọ bụ mmanụ mmanụ mmanụ na-amaghị nwoke.
Coluracetam jikọtara nke ọma na racetam ndị ọzọ yana kwa ihe ndi ozo. Ihe atụ nke oghere coluracetam ndị a bụ coluracetam oxiracetam stack na coluracetam fasoracetam stack. Nke a na-enye ohere maka nyocha ọzọ na coluracetam na ngwaahịa ndị ọzọ. Coluracetam nwere noopept nwere ike ịbụ njikọta mmekọrịta maka ịkwalite ebe nchekwa na ọrụ ịma ihe.
Na mgbakwunye, coluracetam dị ka ọ dị na racetam ndị ọzọ na-abawanye ọkwa acetylcholine ebe a na-enweta choline na-ada ada. Nke a na - eme ka stluracetam nwee ezigbo choline dịka coluracetam Alpha GPC stack.
Ọnwụnwa amachibidoro ụlọ ọgwụ dị adị iji kwado abamuru nke coluracetam Ọzọkwa ọtụtụ ahụmịhe coluracetam onwe onye na-atụ aro uru ha bara. Nke a na-egosi na achọrọ nyocha ọzọ iji kwado abamuru ndị a.
BrainCells Inc. emechiela ka coluracetam mepere emepe maka ikikere maka inwekwu nyocha ụlọọgwụ.
Mmekọrịta mmekọrịta nke Coluracetam na ọgwụ ndị ọzọ bụkwa mpaghara chọrọ ọmụmụ ihe ndị ọzọ.
Akaike A, et al. (1998). Ihe nchedo nke MKC-231, ihe nnochi anya nke chop uptake enhancer, na glutamate cytotoxicity na omenala cortical neurons. Jpn J Pharmacol.
Bessho, T., Takashina, K., Tabata, R., Ohshima, C., Chaki, H., Yamabe, H., Egawa, M., Tobe, A., & Saito, K. (1996). Mmetụta nke akwụkwọ akụkọ a dị elu choline uptake enhancer 2- (2-oxopyrrolidin-1-yl) -N- (2,3-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrofuro [2,3-b] quinolin-4- yl) acetoamide na mpe nke mmiri maze mmụta na oke. Arzneimittel-Forschung, 46(4), 369-373.
Murai, S., Saito, H., Abe, E., Masuda, Y., Odashima, J., & Itoh, T. (1994). MKC-231, onye na - eme ihe choline uptake, ameliorates na - arụ ọrụ ebe nchekwa ụkọ na belata acikilcholine hippocampal acrollini dị elu na ụmụ oke. Journal of Nzipu Neural, 98 (1), 1–13.doi: 10.1007 / bf01277590.
Shirayama, Y., Yamamoto, A., Nishimura, T., Katayama, S., & Kawahara, R. (2007). Ihe ngosi na-aga n'ihu na nkwalite ihe nkwalite MKC-231 na-eme ka mmejọ omume na-akpata phencyclidine na mbelata nke septal cholinergic neurons na oke. European Neuropsychopharmacology, 17 (9), 616-626. https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2007.02.011.
BrainCells Inc. na-ekwupụta nsonaazụ sitere na nchọpụta nyocha nke 2a nke BCI-540Abachị Nọvemba 21, 2011, na Wayback Machine.
IWU COLURACETAM MARA (135463-81-9)
2.Gịnị bụ Coluracetam?
4. Uru nke Coluracetam
5.Coluracetam Vs aniracetam, fasoracetam, pramiracetam na Piracetam. Kedu ihe dị iche?
6.Coluracetam usoro onunu ogwu, Tojupụtara, Mmeju
7.Side Mmetụta & Mmekọrịta
8.Clinical research & Ahụmahụ Onye Ọrụ
9.Onye nwere ike iji coluracetam?
10. Ebee ka ịzụta Coluracetam?